जा'डोयाममा ग्या'स्ट्रिकको स'मस्या हुने'ले चि'या खाने कि क'फी ? सबैले जान्नै पर्ने कु'रा - HPsanchar.com
जा’डोयाममा ग्या’स्ट्रिकको स’मस्या हुने’ले चि’या खाने कि क’फी ? सबैले जान्नै पर्ने कु’रा
November 25, 2020 biplov adhikari खानपान 0
जा’डोयाममा औसतमा भन्दा धेरै चि’या वा क’फी पिउने चलन धेरैको हुन्छ । कोही दू’ध राखेको चि’याले ग्या’स्ट्रिक गराउने भन्दै कालो चिया धेरै पिउने गर्छन् त कोही दूध चि’या र कफी नै पिउन पनि ड’राउँदैनन् । तर चिया र कफी पिउनु ग्या’स्ट्रिक र अ’पचको समस्या भएका बिरामीको लागि कत्तिको हानिकारक छ ? वास्तवमा हिउँदमा मानिसहरू विभिन्न प्रकारका फ्राइड रोस्ट खान्छन्, जसले एसिडिटी र ग्या’स्ट्रिकको समस्याहरू निम्त्याउँछ । कहिलेकाँही यस्ता खानामा रहेको अम्लताले पे’टको दुखाइ, छातीमा जकडिएको वा गम्भीर टाउको दु’खाइको समस्या पनि निम्त्याउँछ । तर के मानिसहरू चिया पिएर ग्या’स्ट्रिक या एसिडिटीको शिका’र हुने गर्छन् ? यदि हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा चियाको विकल्पमा के पिउन सकिन्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्नको लागि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विभिन्न किसिमका खोजीहरू भएका छन् ।
ग्या’स्ट्रिकको समस्यामा चिया र कफी- २०१३ मा गरिएको एक अध्ययनले ग्या’स्ट्रिकको स’मस्या भएकाहरूले कफी पिउँदा समस्या झनै बढ्ने सम्भावना रहेको देखाएको छ । यस कारणले गर्दा मानिसहरूमा भो’क कम लाग्ने, डका’र धेरै आउने र पे’टमा दु’खाइको मससुस हुने गर्छ। चिकित्सक र स्वा’स्थ्य संगठनहरूले समेत ग्या’स्ट्रिकको समस्या भएका मान्छेमा कफीजन्य पेय पदार्थबाट बच्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । ती संगठनहरूको अध्ययन रिपोर्टले ग्या’स्ट्रिकका बिरामीले जति धेरै कफी वा चियाको सेवन गर्यो उति नै यसको समस्या बढ्दै जाने बताएको छ ।
ग्या’स्ट्रिकको समस्यामा कफी- जर्नल अफ गेस्ट्रोएन्टेरोलोजी एण्ड हेपेटोलोजीमा प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा स्ट्यानफोर्ड युनिभर्सिटीका सह प्राध्यापकले ग्या’स्ट्रिक भएका बिरामीहरूको जीवनशैली परिवर्तनको बारेमा कुरा गर्दा कफी एवं कफीजन्य पेय पदार्थबाट सकेसम्म टाढै बस्न सल्लाह दिएका थिए । यसरी यदि तपाईंले कफी पिउनुहुन्छ, जसमा कफीजन्य पदार्थ अधिक मात्रा हुन्छ भने यसले पे’टमा उत्पन्न हुने ग्यास सम्बन्धी समस्यालाई बढाउन पनि सक्छ ।
ग्या’स्ट्रिकको समस्यामा चिया पिउँदाका फाइदाहरू- अब चिया र ग्यासको समस्याको बारेमा कुरा गर्दा अनुसन्धानकर्ताहरूले भनिरहेका छन् कि यी सबै क्याफिनयुक्त पदार्थहरूले ग्यासको समस्यालाई बढाउन सक्दछ, चाहे यो कफीमा होस् वा चियामा वा अन्य कुनै खाद्यान्न वस्तुहरूमा । चियामा क्याफिन मात्र हुँदैन तर अन्य धेरै कम्पोनेन्टहरू पनि हुन्छन् । यदि तपाईंले चिया पिउँदा ग्या’सको समस्या बढाउने कफिन मात्रै नभएर त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने पदार्थ पनि त्यसमा पाउन सक्नुहुनेछ । तर त्यसको लागि तपाईंले केही ध्यान दिनुपर्ने कुरा समेत छ । उदाहरणको लागि चियामा धेरै दूध र चियापत्तीहरू नथप्नुहोस् । यसको सट्टामा चियाको पनि फरक भेराइटीहरू छान्नुहोस् । जस्तैः -का’गती चिया -कालो चिया -हर्वल चिया -सहजनको पातको चिया
कति हा’इट भएको मानिसको तौ’ल कति हुनु पर्छ ? मानिसको तौ’ल कति हुनुपर्छ ? यसको जवाफ उक्त व्यक्तिको उ’चाई र शा’रीरिक ब’नौटलाई आधार मानेर दिन सकिन्छ । तौ’ल बढी हुनु वा घ’टी हुनु भनेको शा’रीरिक स’मस्या हो । अ’स्वभाविक तौ’ल बढी हुनुले विभिन्न रो’ग नि’म्त्याउँछ । शरी’र भ’द्दा देखिन्छ । खानपान, जीवनशैली, ह’र्मोनल परिवर्तन जस्ता थुप्रै कारणले तौ’ल बढ्छ । अ’स्वभाविक रुपमा कम तौ’ल हुनु पनि ठीक होइन । यद्यपी हामीलाई थाहा हुँदैन, आफ्नो तौ’ल कति हुनुपर्छ ?
मो’टोपन जाँच्ने सर्वमान्य मानक: श’रीरको तौ’ल बढी हुनु र कम हुनु दुबै रो’गको संकेत हो । त्यसैले आफ्नो तौ’लबारे जानकार हुनुपर्छ । यसका लागि सहि तरिका हो, बि’एमआई अर्थात ब’डी मा’स इ’न्डेक्स । यो मो’टोपन जाँच्ने सर्वमान्य मा’नक हो । यसरी जाँच्ने ? हाम्रो श’रीरको लम्बाई र तौ’लको हिसाब बि’एमअईबाट निकाल्न सकिन्छ । तपाईले आफ्नो श’रीरको ल’म्बाई से’न्टिमिटरमा नाप्नुपर्छ । र, त्यसमा १ सय घ’टाउनुपर्छ । जस्तो कि, तपाईको श’रीरको ल’म्बाई ५ फिट दशमलव ५ इ’न्च छ भने तपाईको से’न्टिमिटरमा यो एक सय ७० सेन्टिमिटर हो । अब यसबाट १०० घ’टाइदिने हो भने, बाँकी ७० रहन्छ । अतः तपाईको उचाई ५ फिट ५ इ’न्चको छ भने, तौ’ल ७० केजी हुनुपर्छ । यो भन्दा कम वा बढी तौ’ल सहि हुन्न । हाम्रो औसत उचाई पाँच फि’ट भन्दा माथि हुन्छ । पाँच फि’ट उचाई भएको मानिसको तौ’ल ५० देखि ५४ केजीसम्म सामन्य हो । ५ फिट १ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौल ५१ देखि ५५ केजीसम्म सामन्य हो । ५ फिट २ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ५६ देखि ६० केजीसम्म सामन्य हो ।
५ फिट ३ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ५७ देखि ६१ केजीसम्म सामन्य हो । ५ फिट ४ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ५८ देखि ६३ केजीसम्म सामन्य हो । ५ फिट ५ इन्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ६० देखि ६५ केजीसम्म सामन्य हो । ५ फिट ६ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ६१ देखि ६६ के’जीसम्म सामन्य हो । ५ फिट ७ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ६४ देखि ६९ केजीसम्म सामन्य हो । ५ फिट ८ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ६५ देखि ७० केजीसम्म सामन्य हो । ५ फिट ९ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ६७ देखि ७२ केजीसम्म सामन्य हो । ६ फिट उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ७३ देखि ७८ केजीसम्म सामन्य हो । ६ फिट १ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ७३ देखि ८० केजीसम्म सामन्य हो । ६ फिट २ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ७७ देखि ८३ केजीसम्म सामन्य हो । ६ फिट ३ इ’न्च उचाई भएको व्यक्तिको तौ’ल ७९ देखि ८५ के’जीसम्म सामन्य हो ।
खतरानक अवस्था: सामन्य भन्दा बढी तौल हुनु भनेको श’रीरमा रो’गको संभावना बढ्नु पनि हो । त्यसैले सकेसम्म तौ’ललाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । असामन्य मा’टोपनले म’धुमेह, उच्च र’क्तचाप लगायत हृ’दय रो’गको ख’तरा बढाउँछ । कसरी बढ्छ मो’टोपन मा’टोपन बढ्नुको केहि कारण छन् । एक त हाम्रो जीवनशैली पनि मो’टोपन बढ्नुमा जिम्मेवार हुन्छ । अस्तव्यस्त जीवनशैलीको कारण श’रीरमा बो’सोको मात्रा बढ्छ । त्यस्तै जथाभावी र अनियन्त्रित खानपानले पनि मो’टोपन बढ्छ । कतिपय ह’र्मोनल परिवर्तनको कारणले समेत श’रीरमा अस्वभाविक मो’टोपन बढ्ने वा घ’ट्ने हुन्छ । यसबाहेक बं’शानुगत कारणले मो’टोपन बढ्ने तथ्य बाहिर आएको छ । सामन्य हिसाबले हेर्दा, हामी खानाको रुपमा जति क्या’लोरी लिन्छौं, त्यस अनुरुप खर्च गरिएन भने तौ’ल बढ्छ । १. श’रीरलाई आवश्यक्ताभन्दा बढी खानेकुराको से’वन २. निस्क्रिय जीवनशैली ३. बं’शानुगत कारण ४. कतिपय अवस्थामा म’नोवैज्ञानिक कारणले पनि मो’टोपन बढ्छ ५. ग’र्भावस्थामा तौल बढ्न सक्छ । ६. केहि यस्ता औ’षधी हुन्छ, जसले मो’टोपन बढ्छ
कसरी घ’टाउने तौल ? तौ’ल घ’टाउनका लागि धेरैले खानपानमा क’टौती गर्छन् । तर, यो सहि तरिका होइन । खानपानमा क’टौती गर्दा श’रीरलाई आवश्यक पो’षक त’त्वको अभाव हुन्छ । परिणमतः त्यसले रो’ग निम्त्या’उन सक्छ । १. तौ’ल घ’टाउनका लागि आफ्नो जी’वनशैली परिवर्तन गर्नुपर्छ । खाने, वस्ने, सुत्ने समय नियमित हुनुपर्छ । शा’रीरिक क्रि’यामा जोड दिनुपर्छ । सधै सक्रिय र फुर्तिलो हुनुपर्छ । २. खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । एकै पटकमा धेरै खाना खानु हुँदैन । सकेसम्म हल्का र सुपाच्य खानेकुरा सेवन गर्नुपर्छ । ता’रेको, भु’टेको, म’सलेदार, वो’सोयुक्त खानेकुराले पनि तौ’ल बढाउँछ । ३. एकै स्थानमा लामो समय बस्ने, भोक लागेपछि एकैपटक धेरै खाने बानी त्याग्नुपर्छ । कार्यलयमा होस् वा घरमा, यताउता हिँड्ने, सानोतिने शा’रीरिक काम गर्ने गर्नुपर्छ । ४. तौ’ल सन्तुलित राख्ने राम्रो काइदा हो, व्या’याम । नियमित रुपमा व्या’याम, योगा गर्दा पनि तौ’ल बढ्दैन । ५. सकेसम्म दिनभर पैदल हिँड्ने बानी गरौं । छोटो यात्रा गर्नुपरे पनि गाडी, मोटरसाइकल चढ्ने बानी त्याग्नुपर्छ । ६. राती खाना खानसाथ सुत्नु हुँदैन । खाना र सुत्ने समयवीच कम्तीमा तीन घ’ण्टाको अन्तर हुनुपर्छ । ७. टेलिभिजन हेर्दे, कम्प्युटर, ल्यापटप, मोबाइल चलाउँदै स्न्या’क्स खाने बानी त्यागौं ।
रा’ति नि’द्रा लाग्दै’न ? सु’त्नुअघि शरी’रको यो भा’ग थिच्नु’स्
यस का’रण फु’ट्छ ओ’ठ, त’पाईलाई थाहा नभए’का ५ कार’ण